Celebrating the reception on the commemoration of the 70th Anniversary of the Independence of the Republic of the Union of Myanmar – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Celebrating the reception on the commemoration of the 70th Anniversary of the Independence of the Republic of the Union of Myanmar
The Embassy of the Republic of the Union of Myanmar in Jakarta together with the Permanent Mission of the Republic of the Union of Myanmar to ASEAN heldareception on the commemoration of the 70th Anniversary of the Independence of the Republic of the Union of Myanmar at the Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski in Jakarta, on 4th January 2018. The occasion also marked the 68th anniversary of diplomatic relations between Myanmar and Indonesia. The reception was attended by H.E. Mr. Wiranto, Minister for the Coordinating Ministry of Political, Legal and Security Affairs as the Guest of Honour. H.E. Mr. Dato Paduka Lim Jock Hoi, Secretary General for ASEAN, H.E. Mr. A.M. Fachir, Vice Minister for the Ministry of Foreign Affairs, H.E. Mrs. Ratih Nurdiati, Vice Minister for the Ministry of State Secretariat, H.E. Mr. Carlo B. Tewu, Deputy Minister of International Relations for the Coordinating Ministry of Political, Legal and Security Affairs, Mr. Sandiago S. Uno, the Deputy Governor of Jakarta, Dr. Desra Percara, Director General for Asia Pacific and African Affairs of the Ministry of Foreign Affairs, Senior Officers and Advisors from Indonesian government, ambassadors, head of Missions, deputy chief of Missions and diplomats from different embassies, also from UN and specialized agencies, assigned in Jakarta, officials from ASEAN Secretariat, Military Attaches, local business community, Myanmar scholarship students and Myanmar families residing in Indonesia, totally over 500 invited guests attended the event.
ဂျကာတာမြို့၊ မြန်မာသံရုံးနှင့် မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးတို့မှ(၇၀) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ခြင်း
ဂျကာတာမြို့၊ မြန်မာသံရုံးနှင့် မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးတို့ စုပေါင်းပြုလုပ် သည့် (၇၀) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက်နေ့၌ ဂျကာတာမြို့ Hotel Indonesia Kempinski တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပြီး အခမ်းအနားသို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ နိုင်ငံရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ညှိနှိုင်းရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Wiranto၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. Dato Paduka Lim Jock Hoi၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. A.M. Fachir၊ အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mrs. Ratih Nurdiati၊ နိုင်ငံရေး၊ ဥပဒေရေးရာ နှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Lutfi Rauf နှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Carlo B. Tewu၊ ဂျကာတာမြို့တော် ဒုတိယမြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး H.E. Mr. Sandiaga S. Uno၊ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှပစိဖိတ်နှင့် အာဖရိကရေးရာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Dr. Desra Percaya ၊ အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများမှ အရာရှိကြီးများနှင့် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်သံအမတ်ကြီး များ၊ ဂျကာတာမြို့အခြေစိုက် သံရုံး၊ အဖွဲ့ရုံးများမှ သံရုံးအကြီးအကဲများ၊ ဒုတိယအကြီးအကဲများ နှင့် သံတမန်များ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများမှ အကြီးအကဲများ၊ စစ်သံမှူးများ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် ရုံးမှ ဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်များနှင့် အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာမိသားစုများ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှပညာ တော်သင်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဖိတ်ကြားထားသူများ စုစုပေါင်း ဧည့်ပရိသတ် (၅၀၀) ကျော် စုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။